China sectional echebe Vulcanizing Press ZLJ Series Arọ-oru Type factory na-emepụta | Antai
Ojiji Eriri akwa 100 psi (7 n'arọ / cm sq.)
Eriri eriri igwe 200 psi (14 n'arọ / cm sq.)
Max. Obosara Obosara Site na 650mm ruo 3000mm
Sistemụ Nrụgide Akpa mmiri (ọ nwekwara ike iji nrụgide ikuku.). Pịa maka 100 PSI, 200 PSI wdg, nrụgide elu maka akwa na eriri igwe, ruo 1.8Mpa.
Vulcanizing Okpomọkụ Vulcanizing okpomọkụ: 145 ℃ (mgbanwe 0 ~ 200 ℃)
Jụrụ usoro Nrụgide nrụgide maka ịjụ oyi, oge jụrụ naanị 5mins (jụrụ site na 145 ℃ ruo 75 ℃).
Ogo nke kpo oku Bias angle 22 ℃ ma ọ bụ 17 ℃, 20 ℃, rektangulu na ndị ọzọ degrees maka nhọrọ.
Voltaji 220V, 380V, 400V, 415V, 440V, 480V, 660V, ma ọ bụ dịka arịrịọ ndị ahịa.
1. 200 psi (14 n'arọ / cm sq.) Nkeji adabara maka ịgbanye eriri igwe eji ebu eriri.
2. Ọ na - anabata ọgbụgba nchara nrị na akwa ọgbakọ.
(Maka obere nsogbu chọrọ, nwekwara ihe dị arọ nke aluminom)
Usoro imeziwanye nke ọma dị mfe ma dị mfe iji, chebe onwe ya pụọ ​​na mbibi nke nwere ike ibute nsogbu nke mkpọchi.
3.Lightweight aluminom na-eji sistemu ohuru ngwa ngwa n'ime platens.
4. Customization: kpo oku platen n'akuku configurations na multiple platen ndokwa ndị dị ka kwa ahịa na-arịọ.
5.New eletriki njikọ usoro: Oge ochie imewe plọg & anya bụ nke ewepụghị plọg, plọg atụdo dị mfe-agbaji. Ngwunye plọg ọhụrụ anyị bụ ihe sayensị na ezi uche. Ọ na-arụ ọrụ dị mfe, nchekwa na ntụkwasị obi.
6.Pressure akpa usoro:
Ọ nwere ike ịga n'ihu site na mmiri na ikuku, otu oge na-akpụzi, na-enweghị eriri igwe, ịdị arọ dị mfe na nrụgide nnwale nke ụlọ ọrụ na-eru 2.5MPa (akpa ejiji oge ochie na-eme ka akpa a na-ejizi ígwè na bolts, dị arọ.)
A. Akpa mgbapụta na-arụ ọrụ na nlele nrụgide, na-enye ohere ntinye ngwa ngwa nke nrụgide ruo 200PSI maka eriri eriri igwe. Usoro dum ga - abụ ọnọdụ zuru ezu. Mgbe iji ọhụrụ jụrụ usoro na kpo oku platen, ọ nwere ike wetuo si 145 ℃ 75 ℃ n'ime 5 nkeji.
B. Jụrụ mgbapụta, mgbe ọ na-arụ ọrụ na ikuku Compressor, nsogbu ikuku, a ga-eji mgbapụta dị otú ahụ mee ka obi jụrụ. (Biko rịba ama na, ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ọ bụla pụrụ iche nke mgbapụta dị jụụ na-arụ ọrụ, biko gwa anyị tupu ịtụ ahịa, voltage ọkọlọtọ bụ 220V otu oge)
Nkebi nke Vulcanizing Press ZLJ Series are skwesịrị ekwesị maka ndị na-esonye na mpaghara ndị a: nkà mmụta banyere nkà na ụzụ, ụlọ ọrụ kemịkal, igwupụta ígwè, ụlọ ọrụ ike, ọdụ ụgbọ mmiri, ọdụ ụgbọ mmiri. Elu nke njikọta ahụ dị mma, ọ nwere ike belata abrasive ma mee ka eriri ebu rụọ ọrụ ruo ogologo oge.
Na-atụ aro ịrụ ọrụ kwa:
Nsogbu na-agwọ ọrịa: 1.0-2.0 mpa;
Gwọ okpomọkụ: 145 Celsius C;
Vulcanization efere elu okpomọkụ ọdịiche: +/- 2 ° C;
Oge kpo oku (site na ụlọ okpomọkụ ruo 145 Celsius) abụghị ihe karịrị 30 mins;
Volta njikọ: 380V, 50 Hz, AC, ma ọ bụ dị ka arịrịọ onye ahịa;
Mmepụta Ike: 36 KW;
Okpomoku Ndozi Udiri: 0 ~ 200 ° C;
Oge Nhazi Oge: 0 ~ 99 mins
Nke gara aga: DB-G type Steel Cord Conveyor Belt ekpepụsị Machine maka Splicing
Ebu Belt Vulcanization Pịa
Ebu Belt Vulcanzing Press
Rubber ebu eriri Vulcanzing Press